Delta Chat: Ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malalaka sy misokatra | Avy amin'ny Linux
Delta Chat: ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka maimaimpoana sy misokatra
Amin'izao andro iainan'ny teknolojia izao, indrindra amin'ny lafiny fiarovana ny solosaina, tsiambaratelo ary anarana tsy fantatra anarana, ho an'ny vaovao momba ny lesoka na marefo amin'ny fifandraisana sy / na fampiharana fandefasan-kafatra, toy ny, WhatsApp, misy safidy hafa mahaliana, antsoina deltachat.
Mahaliana, satria deltachat vaovao io fampiharana hafatra, izay tsy toy ny malaza hafa, alefaso amin'ny alàlan'ny mailaka ny hafatrao, voafafa raha azo atao, miaraka amin'ny autocrypt. Ary eo anelanelan'ny zavatra hafa, tsy mitaky fisoratana anarana ny mpampiasa azy na aiza na aiza, na tranokala, satria, misy kaonty mailaka efa misy, azo ampiasaina ny serivisiny.
Vao haingana izahay no nandefa lahatsoratra mahaliana iray hafa fampiharana hafatra, ho solon'ny telegrama o WhatsAppantsoina hoe Session. Izay, tsy mitovy amin'ireo, satria:
"Session dia loharanom-baovao misokatra, rindranasan-kafatra fandefasana hafatra azo antoka ho an'ny daholobe izay mampiasa andiana serivera fitehirizana tsy miankina ary protokolom-pitaterana tongolo handefasana hafatra miafina miafina miaraka amin'ny fampahafantarana kely ny metadata ho an'ny mpampiasa. Izy io dia manome izany rehefa manome ny fiasa mahazatra an'ny fampiharana fandefasan-kafatra lehibe".
deltachat, koa dia manana toetra mampiavaka azy, satria manana a fanaraha-maso afovoanyRaha atao teny hafa, io dia mampiasa ny rafitra fifandraisana lehibe indrindra, isan-karazany sy tsy miankina amin'ny toerana rehetra noforonina: ny tamba-jotra misy mpizara mailaka.
1.1 Fomba fiasa lehibe
1.2 Fametrahana amin'ny GNU / Linux
Famolavolana ny lozisialy maimaim-poana sy ny loharano misokatra.
Delta Chat dia manolotra resaka eo no ho eo sy fampifanarahana eo anelanelan'ny fitaovana.
Izy io dia fampiharana multiplatform (Windows, MacOS, Linux, Android ary iOS).
Raha ara-teknika dia fampiharana mailaka izy io fa misy interface interface maoderina.
Mandefa ny hafatra (mailaka) mampiasa kaonty mailaka sy mpamatsy mailaka an'ny mpampiasa.
Mametraka ny enkripsi end-to-end mandeha ho azy rehefa manomboka mifampiresaka ny mpampiasa.
Manolotra resadresaka voamarina amina fanandramana izay manome antoka ny famoahana end-to-end ho azo antoka amin'ny fanafihana mpamatsy na tambajotra miasa.
naoty: Mikasika ny encryption dia tokony homarihina fa ny encryption farany-to-farany tsy miasa eo anelanelan'ny fampiharana fotsiny deltachat, fa miaraka amin'ny rindranasa mailaka hafa raha mifanaraka amin'ny Fenitra fanaingoana Autocrypt Level 1.
Fametrahana amin'ny GNU / Linux
Momba ny Rafitra miasa GNU / Linux, deltachat manome rakitra apetraka amin'ny endrika .deb y AppImage, eo ho eo 70 MB y 107 MB tsirairay avy, izay misy ny stable version 1.0.0, vao nivoaka ny volana desambra lasa teo. Ary azo alaina ao amin'ny Flatpak ary ao amin'ny trano fitahirizana AUR for Arch Linux. Inona no mahatonga ny fametrahana azy ho tena mora sy mifanaraka amin'ny maro amin'ireo fizarana ankehitriny.
Para Android, deltachat, azo alaina ao amin'ny kinova sy habe samihafa, araky ny karazana fitaovana sy kinovan'ny rafitra fiasa ampiasaina.
Farany, manana a tranokala ofisialy tena feno, tsotra ary amin'ny Espaniôla. Izy io dia mirakitra fampahalalana sarobidy sy an-tsipiriany maro, zaraina amin'ny fizarana, toy ny: Misintona, Blog, Support, FAQ ary Forum. Ambonin'ny zavatra rehetra, azy Fizarana FAQ Izy io dia mirakitra fampahalalana marobe mifandraika sy havaozina momba ny fampiharana, izay hanampy amin'ny fahatakarana amin'ny fomba lalina ny fiasa, ny asany ary ny tanjony.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Delta Chat», fampiharana fandefasan-kafatra azo antoka, maimaimpoana ary misokatra, izay misy fiasa mendrika hodinihina mba hisolo ny hafa malaza toa ny Telegram na WhatsApp, misaotra noho ny fisorohana ny fanarahan-dia ary tsy manana fifehezana afovoany, mahaliana sy mahasoa tokoa ho an'ny iray manontolo «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Delta Chat: ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka maimaimpoana sy misokatra
RLBox, ilay haitao vaovao fitokana-monina fitahirizam-boky ampiasain'i Mozilla
Mitandrema raha mandoa vola amin'ny Google Pay ianao amin'ny alàlan'ny vola Paypal anao